Wareegtada Wareegga Biyaha, Biyaha Dhiigboola Polyester Shirkadda
Mashiinka dharka /
MH WaterProof Dhuxusha dhoobada ayaa leh dhamaystir gaar ah oo biyo adkaysi u leh
MH Dhuxusha dhoobada dhaadheer waxay leedahay dhammaystir dhammaystiran oo biyo u adkeysi ah kaas oo horjoogsanaya saameynta kondhilka, taas oo hubaal ka dhigaysa in biyo aan la qaadin. Marka murugada saxda ah loo isticmaalo, gaadiidka biyaha iyada oo loo marayo daloolka cirbadda ayaa laga hortagayaa.
MH-yada aan dharka lahayn ee dhoobada dhaadheer ayaa leh wax fiican oo ka hortagga wasakheynta iyo ilaalinta nadiifinta muddada dheer; adkaysiga cimilada iyo adkeynta dheeraadka ah ee cimilada, caabbinta UV, caabbinta oxidation; tayo fiican iyo jeexjeexin, Tilmaamo ka hortag ah; is-difaac fiican.
Spec: Cabbirka caadiga ahi waa 20/2, 30/3, 40/3
Color: oo leh 800 midab, waxay sifiican ugu dhejisan kartaa dharka tolo.
Features Product: Waxqabadka biyuhu biyuhu ka hortagaan, Gentle Luster, Sareynta Seam Xoog & Muuqashada, Waxsoosaarka aadka u sarreeya, Ranjiga midabka oo balaaran, Cilmiga kiimikada sare.
Codsiyada: Waxaa ku haboon in lagu dhajiyo bakhaarada bakhaarada, gawaarida, maraakiibta, warshadaha, miinooyinka, gawaarida xamuulka, tareenada, ganacsatada, daboolka alaabta beeraha, iwm. Waxaa sidoo kale loo isticmaalaa dharka, alaabta milatariga, dabaasha dibada, dalxiiska dibadda iyo meelaha kale.
30/3 3000y Xargaha tolo Biyo-Biyoodka
20S / 2 Xargaha tolo Biyo-Biyo Ma-Difaaca